Wax soosaarka muuqaalada iyo maqalka iyo macluumaadka teknoolajiyada | Videregående opplæring - vilbli.no
15 baraamijta waxbarashada waxaad kaheli kartaa fursado badan
Naqshadeynta, farsameynta iyo horimarinta agabyada
Timo hagaajinta, ubaxyada, fadhiyada iyo naqshadeynta dukaamada
Wax gadida adeegyada iyo dalxiiska
Wax soosaarka muuqaalada iyo maqalka iyo macluumaadka teknoolajiyada
Current: Wax soosaarka muuqaalada iyo maqalka iyo macluumaadka teknoolajiyada
soo saarista fikradaha iyo habka xalinta dhibaatooyinka
waxyaabaha ku saabsan caawimaada macaamiilka, shabakada, amaanka IT ga iyo barogaraamka
sheegida sheekada iyo qaybinta macluumaadka
sida loo qaado sawirka, filimka iyo naqshadeynta garaafka
hadalka iyo xirfadaha usoo bandhigida
qof wax soosaar leh
xiiseyso IT ga, shabakada iyo qalabka casriga ah
habka muuqaalada foomka leh xiisaha
Waxaad noqon kartaa
qof soosaara qalabka IT ga ama farsamoyaqaan maareynta IT ga
qof naqshadeeya muuqaalada iyo maqalka, farsamoyaqaan qaabilsan muuqaalada iyo maqalka ama qof soosaara muuqaalada iyo maqalka
Eeg dhammaan xirfadaha iyo aqoon-cilmiyeedyada
Meelaha laga shaqeeyo
shirkadaha ka shaqeeya IT ga iyo waaxda IT ga
filimada leh muuqaalada iyo maqalka, shirkadaha sameeya xayeysiinta ama warshadaha dadwaynaha
Waxbarashada xirfadda iyo tababarka waxay ku hagtaa awood u yeelashada xirfadle (leh ama aan lahayn shahaadada ganacsiga ama socdaalka). Kadib dhammaysashada waxbarashada xirfadda iyo tababarka waxaad billaabikartaa shaqo ama inaad qaadato waxbarasho kale:
Waad qaadan karto waxbarasho saa’id ah oo ah koleej xirfaddeed. waxbarashada xirfadda waxay dhistaa xirfaddaha ka sarreeya waxbarashada dugsiga sare waxayna bixisaa waxbarasho xirfadeed saa’id ah oo toos loogu isticmaalo in nolosha loogu shaqeeyo.
Waxaad qaadan kartaa Vg3 caddeynta ogolaanshaha jaamicadda guud ee barnaamijka saa’idka ah
– kaddib Vg2 ama
– kaddib marka aad ku guulaysto awood yeelayashada xirfadle.
Waxaad fursad u heli inaad qaadato tacliinta sare kuna qaadato kulliyad jaamicadeed ama jaamicad.xusuusnow in barnaamijyada waxbarasho qaarkood, sida injineeriyaddam sayniska iyo barashada caafimaadka, kaaga baahan yihiin inaad haysato maadooyin saynis ah.
Waxaad codsan kartaa ogolaanshaha tacliinta sare kaddib koorsda saa’idka ah ama wadiiqadda Y, wadiiqadda xirfadda ee tacliinta sare. Wadiiqadda Y waxaa loogu talo galay leh khibrad waayo aragnimo xirfadeed. koorsooyinka aasaaska iyo wadiiqadda Y waa kuwa ugu badan ee lagu isticmaalo waxbarashada sayniska iyo injineerriyada.
Om wax soosaarka muuqaalada iyo maqalka iyo macluumaadka teknoolajiyada